Home Wararka MW Farmaajo oo xalay u sheegay beesha Daarood in qabiilnimo lagula...
MW Farmaajo oo xalay u sheegay beesha Daarood in qabiilnimo lagula dagaalayo
Madaxweyne Farmaajo ayaa xalay waxa uu kulan la qaatay odoyaal iyo xildhibaano ka soo jeedo beesha Daarood. Kulankaas ayuu MW Farmaajo ku sheegay in waxa lagula dagaalayo ay tahay qabiil. Farmaajo oo ay ka muuqato caadif qabiil ayaa u sheegay beesha Daarood in waxa loo socda ay tahay kursiga Daarood.
Farmaajo ayaa yiri “idinka ma fahmi kartiin laakiin waxa loo socdaa waa qabiilka Daarood, waxa la iguala dagaalayo waa Daaroodnimo”. Farmaajo ayaa ku daray “hadii maanta uu Hawiye iyo D&M ku guuleystaan in uu Mooshinkaa la meel mariyo waxaad ogaataan aniga ayaa noqonayo madaxweynhihii ugu danbeeyay ee Daarood ee halkaan fariista”.
Farmaajo ayaa waxa uu ka codsaday in hadda loo yeero Xog’hayaha Baarlamaanka Cabdikarin Xaaji Cabdi (Buux) si uu u soo saaro qoraal uu ku jabinayo Mooshinka. Waxa uu iri (.. waxa socdaa, haa , waxa socdaa waa shirqool loo dhigayo beesha Daarood”. Farmaajo oo hadalkiisa sii wataa ayaa yiri “aaway Janaraal Colujoog, waxa loo sheegay in uu ku maqan yahay Masar, wac ha la hadlo Maxamuud Sayid, beesha Mariixaaan hurdada ha ka kacdo”.
Farmaajo oo ay muujiyana in uu yahay nin lagu bahdilay Magaalada Muqadishu ayaa ku adkeeystay oo yiri “kurisiga adiga ayaa idin keenay oo idinka ma keensanina, hadii aad xafidi weydaan walaahi aniga layma eedayn karo”.
Mid ka mida dadkii ku sugnaa shirkaas ayaa u sheegay MOL in MW Farmaajo u muuqday mid waali ku dhow oo waxa uu ku halayo aanu garanaynin. Mid ka mida ka qayb galayaasha shirka ayaa u sheegay Farmaajo in uu isdajiyo. Waxa uu yiri “beesha Mariixaan dagaal qabiil diyaar uma aha xiligaan mana rabno in aan godob qabiil galno”. Waxa uu ku daray “cid adiga ku diidan ma jirto mana jirto laakiin waxa Soomaali qaati ka taagan tahay waa seedigaa Xassan Kheyre, hadii aad rabtid in aad sii joogtid ninkii iscasilaad ka keen”.
Dhanka kale qaar ka mida ka qayb galayaasha shirka ayaa ku waafaqay in qabiil lagu beegsanayo MW Farmaajo. Waxaa goobta laga saaray gudi kooban oo ka soo shaqeeyo in xoghayaha baarlamaanka Buux loo keeno Madaxweyna, isla caawana uu qoraalka u soo saaro kaas oo lagu sheegayo in xildhibaanada daar ee saxiixay liiska ay ka baxeen”.
Previous articleShirkada Twitter oo ka xirtay MW Farmaajo in ka badan 100 koontooyin oo been abuur ah (Cadeymo)
Next articleDeg deg: weerar ka dhacay Magaalada Boossaaso
Wasiirka A. Dibadda Turkiga oo markii labaad baajiyay safar uu ku...